Izindlela zokwelashwa kwesikhumba sokwehlisa isikhumba
Namathisela abantu okuthiwa i-stria. Lezi zimigqa ezimhlophe, ezibomvu noma ezibomvu ezakhiwe ezindaweni ezilula zesikhumba. Amathrekhi angabonakala esiswini, esifubeni, ezinqeni. Ngokuvamile kwenzeka ngesikhathi sokukhula, emva kwenyanga yesihlanu yokukhulelwa noma ngokunciphisa okujulile kwesisindo. Izindlela zokwelashwa kwamanothi ahlukene zihlukene, kuqala ngokuvimbela, ziqedile ngokulungiswa kwe laser.
Kunombono owelula amamaki avela kuphela mayelana nezinkinga zesisindo esiningi. Kodwa lo mbono awuqiniso. Amanothi athawula akhombisa ukuthi amaseli akhiqiza i-collagen ne-elastin fibers abhujiswa. Lokhu kungenxa yokuthi umzimba owedlula ukhiqiza i-cortisol ye-hormone, ebulala i-collagen. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi i-striae ivela ngezikhathi zokuvuselelwa kwe-hormonal esebenzayo yomzimba - ngesikhathi sokukhulelwa ebusheni.
Ngokusho kososayensi, wonke owesifazane wesibili emva kwezinyanga ezinhlanu zokukhulelwa, alula amakhanda ngesisu nesifuba. Phakathi nalesi sikhathi, isikhumba esibucayi sincane kakhulu, sidinga ukunakekelwa okungaphezu kokujwayelekile. Izindlela zokwelapha nokuvimbela ukwakhiwa kwamanothi elula esikhumbeni kuncishiswa ekusetshenzisweni kwama-creams akhethekile nama-gel. Futhi ukuvimbela kufanele kunikelwe ukunakwa okukhethekile. Phela, kunzima ukwelashwa kunokuba uxwayise. Enye yezindlela i-aromatherapy. Hlanganisa izindawo ezinenkinga nge-camomile, i-rose noma i-lavender amafutha.
Ama-mark mark kuphela akwazi ukucaciswa ngama-creams akhethekile. Futhi ukuthi angeke aphinde avele, odokotela bayeluleka ukuthatha u-vitamin E. Uma ama-stretch amamaki awawunkulu futhi ngemuva kokudalwa kwawo kudlulile okungaphezu kwezinyanga eziyisithupha, ungazama ukufaka izigxobo zasolwandle. Isebenza ngokukhethekile i-spirulina.
Ukunconywa kwama-salon wamanje njengenye yezindlela zokwelapha izici zesikhumba esilulekile - inhlanganisela ye-dermabrasion ne-peeling. I-stria ihlukaniswa ne-laser ekhethekile, futhi ngemva kwalokho, amagagasi e-ultrasonic ayaphathwa. Nge-ultrasound, isendlalelo sangaphezulu sesikhumba sisusiwe ngokuphelele. Futhi amakhemikhali aphikisayo, okwenziwa ngokulandelayo, aphefumula amangqamuzana afile. Ngenxa yalendlela, ukuvuselelwa kwamangqamuzana esikhumba kuvuselelwe, ukuqina kwawo kwanda.
Enye indlela yokwelapha amakhanda e-skin stretch is mesotherapy. Le ndlela isetshenziswa kakhulu ekwelapheni kwe-cellulite. Isisekelo salo sinjalo. Ngaphansi kwesikhumba, izinto eziphilayo ezisebenzayo zilawulwa ngezilinganiso ezincane. Lezi zinto ezivela ngaphakathi zondla isikhumba, zibuyisela ukuqina kwayo.
Omama abahlengikazi kufanele baqonde ukuthi bazokwazi ukuqhubeka nokwelashwa kwamanothi okuthungatha kuphela emva kokuphela kokulahlwa. Futhi ngaphambi kwanoma iyiphi inqubo, kufanele uxhumane nodokotela wakho.
Ukususwa kwezinwele ze-Laser kuvame ukusetshenziswa ukukhipha amamaki welula. Le nqubo iyinkimbinkimbi kakhulu futhi iyabiza. Kuphela ukulungiselela lolu hlobo lwezokwelapha kuthatha kusuka ezinyangeni ezimbili kuya kwezinyanga ezimbili. Ngemuva kokuqeqeshwa, ukusebenza ngokwalo kulandela. Isiguli ngaphansi kwezingubo ze-anesthesia sinqume umgodi wesilazi. Emva kokusebenza, udinga ukuchitha usuku emtholampilo kanye nezinye izinsuku ezingu-10-15 ngaphandle kokuphuma embhedeni. Emva kwalokhu, kunenqubo elula yokutakula, ukuxubha ama-creams akhethekile. Ngemuva kokuthi ikhasi laser liphikisana ukuze livele elangeni. Inqubo iyabuhlungu, iyabiza futhi ithatha isikhathi eside kakhulu.
Abanye abalandeli bezinyathelo ezinkulu kakhulu banquma ngisho nokuqhuba imisebenzi yokuhlinzwa. Izinyathelo ezinjalo zifanelekile, uma izimpawu ezithengiswayo zikhulunywa kakhulu futhi zifiphaze umzimba. Kodwa lokhu kuyingozi kakhulu. Noma yikuphi ukungenelela okuhlinzayo kuyingozi empilweni nasekuphileni komuntu.
Kodwa khumbula, kungcono ukuvimbela ukwakhiwa kwe-striae kunokuba uzame izindlela ezahlukene zokwelapha amanothi afana.
Yini ewusizo futhi eyingozi kumazinyo?
Amakhambi omphakathi okwenza ngcono ukukhanya
Izimbangela zezoyezi nokuphathwa
Ukuphulukisa impahla ye-coriander
I-demodecosis: ukwelashwa ngamakhambi abantu
Indlela yokuthuthukisa ukugaya?
Ubuhlungu emilenzeni yezingane ezincane
Urolithiasis wezinja namakati
Ukwelashwa kwe-laryngotracheitis ezinganeni ekhaya
Ukufakwa kwe-Photorejuvenation nendawo engaphansi kwamehlo
Amasks ezinamahloni esikhumba esikhukhulayo
Indlela yokuzolalisa isimiso sezinzwa
Ungakhetha kanjani i-mattress wama-orthopedic?
Isobho leshlobo namazambane kanye ne-zucchini
Iyiphi insimbi yentombazane engcono kakhulu?
Siyakhathalela isikhumba samadokodo
Amantombazane aphefumulayo: ukushisa umbuso, izingubo nokuhamba
Inqubo entsha yegolide eshibhile yombimbi ngaphansi kwamehlo
Siya enkulisa! Yini abazali okufanele bayilungiselele?
Isobho esinomsoco owusizo ngamaqanda, inyama nenyama: zokupheka ezilula ngezithombe ezinyathelo ngezinyathelo